Tsy hirehitra ny jiro fitendry MacBook anao? Izany no mitranga | Vaovao momba ny gadget
Pablo ortega | | General, About us, solosaina, portable
Iray amin'ireo fiasa tsara indrindra amin'ny kitendry solosaina finday no tokony haverina hazavana mba hahafahanay manoratra amin'ny maizina tsy misy olana. Ny mpamaky ny Actualidad Gadget dia nametraka taminay izao fanontaniana izao: "maninona aho indraindray no tsy afaka mampirehitra ny jiro fitendry MacBook ary misy sary miseho eo amin'ny efijery toa voasakana ny safidy hifehy ny jiro fitendry?" Tsotra ny valiny ary vao mainka aza ny vahaolana.
Kitendry toy ny Ny MacBook dia mifandray amin'ny sensor izay mahita hazavana ny tontolo iainana. Ity sensor ity dia eo akaikin'ny fakantsary fakan-tsarimihetsika finday ihany. Rehefa tsikaritry ny sensor fa eo amin'ny toerana mamirapiratra ianao dia manakana mivantana ny safidy hifehezana ny jiro fitendry satria mihevitra izy fa toa tsara ny kitendry. Inona no hitranga raha mbola te handrehitra ny jiro fitendry ianao ary hiseho toa voasakana ny safidy?
Ny sisa ataonao dia sarony, amin'ny rantsan-tànana na amin'ny tanana, ny sensor sensor an'ny solosainao finday, ilay faribolana kely izay ho hitanao eo akaikin'ny fakantsary fakantsary. Raha vao mihidy ny sensor ianao dia ho hitanao fa ny safidy hampiakarana na hampidina ny fahazavana ny klavinao dia efa voahidy mivantana.
Raha manana fanontaniana momba ny iray amin'ireo fitaovanao ianao dia tadidio fa afaka manoratra tweet aminay amin'ny alàlan'ny kaonty Twitter ofisialinay izahay: @agadget
Fanazavana fanampiny- Ireo no vaovao ho hitantsika ao amin'ny Bluetooth 4.1
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Tsy mirehitra ve ny jiro fitendry amin'ny MacBook? Izany no mitranga
lua dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratra! Sambany nahita an'io aho androany ary natahotra nieritreritra fa nosakanako izany hahahaha
Mamaly an'i Lua
Tena tsara !! Misaotra tamin'ny fandraisana anjara. =)
Hakafakao amin'ny MobaLiveCD ny sary kapila